नेपाली नायिका सलमान सँग चलचित्र गर्दै ? « OsNepal News
नेपाली नायिका सलमान सँग चलचित्र गर्दै ?
लामो समय देखी कुनै पनि चलचित्रमा नायिका जेनिसा के.सी देखिएकी छैनन् । उनी लामो समय सम्मा नदेखिनुमा उनका अनुसार उनी अहिले बलिउडमा करियर बनाउनको लागि संघर्ष गर्दैछिन्।
जेनिशा बलिउडमा संघर्ष गर्दा पनि निक्कै उत्साहित देखिन्छिन् । उनी उत्साहित हुँदै भन्छिन्, ” प्रियंका चोपडाको आमाले मलाई निकै माया गर्नुहुन्छ। स्मार्ट र राम्री भन्नुहुन्छ। उहाँको आग्रह पछि नै मैले प्रियंकाको ब्यानरको चलचित्रको गीतमा अभिनय गरेकी हूँ “।
बलिउडमा करियर बनाउनको लागि उनी अहिले जिम जाने, हिन्दी तथा उर्दु भाषा सिक्ने, सरोज खानसंग नृत्य सिक्ने गर्दैछिन्। नेपाली दर्शकहरुले जेनिसाले नेपाली चलचित्रमा राम्रो गर्न नसकेपछि बलिउड चलचित्रमा गएको भन्ने कुरालाई जेनिसा नकार्छिन्।
जेनिसाका अनुसार, बलिउडका मिथुन दा उनका बुवाका साथी हुन्। त्यसैले मिथुन दाले नै जेनिसालाई मार्गदर्शन गर्ने सलमान खान जस्ता अभिनेता संग भेटाउने गरेका छन् । भविष्यमा उनलाई सलमान खान संगका चलचित्रमा पनि देख्न सकिनेछ।
गायक प्रमोद खरेलले सम्झिए दिवगङ्त मन्त्री अधिकारीलाई
चिप्लेढुङ्गा, २४ चैत: ‘मबिना कसै–कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा ।’ शुक्रबार पोखरा सभागृहको स्टेजमा पछिल्लो पुस्ताका
बहुचर्चित हास्यकलाकार तथा निर्देशक बल्छी धुर्बे र राजू मास्टर मेरी बास्सै बाट अलग्गिए
बहुचर्चित हास्यकलाकार तथा निर्देशक बल्छी धुर्बे ( मरीचमान श्रेष्ठ ) र राजू मास्टर ( राजू
बल्छी धुर्बेको रूप परिवर्तन हुदा राजु मास्टर मक्ख
बहुचर्चित हास्यकलाकार तथा चर्चित टेली सीरियल मेरी बास्सैका निर्देशक बल्छी धुर्बे ( मरीचमान श्रेस्ठ) भिन्न
बहुचर्चित हास्यकलाकार साथै मेरी बास्सैका निर्देशक बल्छी धुर्बे र करुणा मिलेर गाएको गीत धेरै दर्शकले मन पराए (भिडियो सहित)
प्रसिद्ध हास्यकलाकार तथा चर्चित टेली सीरियल मेरी बास्सैका निर्देशक मरीचमान श्रेष्ठ (बल्छी धुर्बे) कुनै अपरिचित
सभापति देउवाद्वारा जनसम्पर्क बढाउन निर्देशन
सांसद थापाद्वारा संम्पदा संरक्षण अभियान शुरु
बिस्केटको लिङ्गो जात्रा सम्पन्न
पटकपटकको ध्यानाकर्षणपछि सिंहदरबारमा शाखा
आशिष स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार’ पन्दाकलाई